Zvaungaita Fedora: Isa Microsoft Office 2010 (i386, i686, x86_64) | Kubva kuLinux
Zvaungaita Fedora: Isa Microsoft Office 2010 (i386, i686, x86_64)
Vazhinji vevashandisi veGNU / Linux vanozviwana tiri mu "need" yekushanda takananga neMicrosoft Office nekuda kwezviuru zvezvikonzero, zvese zvine chikonzero uye "zvisina kukodzera", saka uchifunga nezve izvi, panguva ino ndichakuratidza maitiro ekuisa ino hofisi suite mu zvikwata zvedu;).
Kune nzira dzinoverengeka dzekuzadzisa izvi, asi mumaonero angu, yakapusa, yakachengeteka uye isina kushatisa iri kuburikidza Playonlinux.
Kutanga isu ticha dhawunirodha iyo PlayOnLinux repository, nekuti nekutadza, haina kuuya mune yedu software centre :(.
Dhawunirodha PlayOnLinux repository
Kana tangotorwa pasi, tinowana dhairekitori apo faira rakachengetedzwa: PlayOnLinux_yum-3.3.rpm uye tinopeta kaviri pairi.
Gare gare, isu tinovhura terminal uye tinogadziridza edu marekodhi:
Isu takaisa PlayOnLinux uye nekuwedzera kutsamira kuti tikwanise kunyatsoisa nekumhanyisa Microsoft Office 2010.
Cherechedza: Ini handizive kana mushanduro dzakapfuura (Hofisi 2007) zvakafanira kuisa iyo package samba-winbind, kana iwe uchida kuisa iyo 2007 vhezheni, edza kumisikidza Hofisi pasina ino kutsamira kuitira kuti usaise chimwe chinhu chaungangodaro usingade;). Maitiro acho akafanana zvakafanana :).
Kana izvo zvataurwa pamusoro zvaitwa, tinovhura PlayOnLinux uye titange kuimisa (usanetseke, hachisi chinhu chekunyorera kumba nezve: P).
Ipapo iyo "yekutambira" skrini ichaonekwa, inozotora Waini, Microsoft mafonti, pakati pevamwe. Sezvauri kuona, mabhokisi ebhokisi ndeaya erudzi: Anotevera… Anotevera… ¬.¬… Anotevera… Saka iwe unofungei? Tinodzvanya Zvadaro XD.
Isu tinobvuma rezinesi uye nekuenderera.
Panguva ino, isu tinofanirwa kusarudza chikamu Office kusarudza gare gare Microsoft Office 2010 (Kana iwe uchida kuisa iyo 2007 vhezheni, sarudza iyi sarudzo).
Panguva ino tinofanirwa kusarudza nzira panowanikwa Microsoft Office installer, kunyangwe iri mukati mefaira, mune yayo musha, pane CD / DVD, nezvimwe.
Cherechedza: Kana ivo vane MS Office muIO vachatofanira kuiisa, PlayOnLinux haigamuchire ISO mifananidzo;).
Mune yangu nyaya, ini ndinemugadziri mukati mefaira, saka ndinosarudza sarudzo Zvimwe uye ini ndinoratidza iyo nzira sekuonekwa kwayo mumufananidzo. Kana iwe uchifunga kuti wapedza neyakagadziriswa, ndine hurombo kuti kwete, PlayOnLinux inozotanga kurodha pasi mamwe mawindow eWindows kuti uenderere mberi nekumisikidza, usashivirira: Q.
Cherechedza: Zvakaitika kwandiri pane imwe nguva kuti panguva iyi, iko kunyorera kunorembera uchirodha pasi zvinoenderana, kana chinhu chakafanana chikaitika kwauri, kunyange chiri chinhu chinoshamisa kwazvo, tinya bhatani kanzura uye tanga maitiro futi;).
Iye zvino isu tinotanga neyekutanga MS Office kuisirwa.
Isu tapedza nekuisa. Kutanga chero eemhando dzakanyorwa pamusoro, ingori nyaya yekusarudza iyo nekudzvanya bhatani Kanda kana kukundikana izvo, tinya kaviri pairi:
Takagadzirira, isu tine hofisi yedu nyowani nyowani inoshanda pakombuta yedu;).
Nyore here? : D.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Zvaungaita Fedora: Isa Microsoft Office 2010 (i386, i686, x86_64)
Kuisa nenzira iyi, hofisi macros inomhanya pasina matambudziko?
Ndinovimba unondiudza kana macro ari kukufambira zvakanaka, na fi!
Nehurombo ini handishandisi macro, ini handina kukwanisa kukuudza kana vachishanda kana kwete, zvatingaite, kuti isu tese tibude mukukahadzika, ndezvekuti iwe unondipa faira ine mamwe macro uye edza kuona kana ichishanda nemazvo;).
Iyo webhu yakanyatsoona iyo browser (Chrome), asi haisi kunyatso kuona iyo inoshanda system (yakavhurikaSUSE)
Iwe unofanirwa kuchinja yako useragent saka kuti ione kugovera kwaunoshandisa;).
Hazvina kunaka here kuti TUX ioneke?
Kuiswa kwehofisi hakumire ipapo.
Ipapo iwe unofanirwa kuisa zvigamba zveMicrosoft (mapakeji ebasa nevamwe). Unogona kuitwa?
Pindura kuna Sysad
Ini pachokwadi handina kuyedza, isu tinofanirwa kuyeuka kuti kumisikidzwa kweWindows zvinoshandiswa muLinux hazvisi 100% zvinoenderana, iko kutevedzera. Semuenzaniso, hazviite kuisa MS Access pasi peGNU / Linux parizvino :(.
Ndiani akakuudza kuti zvirinani ndinoziva kuti kana uchikwanisa kurodha pasi winetricks uye newaini 1.4 zvichienda mberi asi izvo hazvishande kana ukashandisa PlayOnLinux.
Kuwana kunoshanda paLInux.
Iyo 2003 vhezheni inondishandira, asi iyo 2007 vhezheni haina.
Ini handina kuyedza kuwana 2010 asi 2007 inondishandira kuwedzera kune winetricks inodawo gecko uye pasuru yewaini mushanduro 1.4 asi izvo hazvishande nePlayonlinux, inoshanda muwaini yakachena 1.4 winetricks uye iyo gecko package mune yangu Debian uye LMDE kuwana 2007 kunondishandira.
Handina kuyedza 2010 nekuti ini handina disk rekumisikidza.
Mune yangu nyaya haina kugadzikana, wakateedzera chero gwara?
Tarisa pawebhu ini handicharangarira asi hongu, isa waini iyo inouya munzvimbo yekuyedza yedebian.
2.Then Gadziridza ne .deb package kubva kuwaini1.4.deb kana kuiisa pamusoro peiyo yapfuura vhezheni.
3. Wobva waisa iyo Gecko package iyo inouya mune iyo debian yekuyedza repos.
4. Wobva waisa winetricks kubva kunzvimbo yekuyedza yedebian zvakare.
Asi ini ndakaita zvese kubva kuDebian Testing mu fedora inofanira kunge iri rpm asi haifanire kuchinja nzira yekuisa zvakanyanya.
Ongorora: Ini ndakaita zvese graphically asi kana iwe uchida iwe unogona kuzviita kubva kune iyo terminal, hapana munhu anokumisa iwe. XD
Asi kune izvo izvo kutove neLibreOffcie
Ini ndakaisa hofisi 2007 mune lubuntu 12.04, isina playonlinux, uye ipapo ini ndakaisa Service Pack 3 pasina dambudziko. Saka ndinofungidzira gore ra2010 maitirwo anofanira kushanda zvakare.
Nehurombo, Microsoft Office 2003 na 2007 hazvishande zvakanaka kana iwe ukashandisa magwaro akaomarara. Zvirinani mune yangu kesi, pane nguva dzose zvikanganiso zvinoita kuti zvikone kushandisa "suite" yebasa repamberi (uye kubva pane zvakataurwa zvinoverengerwa kunze uko, zvinoita sechinhu chinoitika kune vanhu vazhinji). Ini handizive kuti iyo 2010 shanduro ichashanda sei, asi handifunge kuti ichaenda zvirinani.
Ndinofanira kutaura kuti ndakaedza kuiisa (Fedora 16 ine kde) uye zvaisaita, muUbuntu ndakaikwanisa asi ndaifanira kuisa raibhurari makumi matatu nemaviri (zvese Ubuntu naFedora vari makumi matanhatu nenomwe)
Chinyorwa ichi chinonakidza kwazvo, kunyange ini ndichisarudza kushandisa ese maWindows windows muchina chaiwo. Ini ndinofunga yakavimbika, yakapusa uye kana iwe ukaneta iwe unogona kuibvisa ichisiya yako linux system yakachena semuridzo. Uye zvakare, ese mahofisi software anoshanda nemazvo musina michina.
Chinhu chekuwana chinonyadzisa, ndakaedza nekuwana 2010 uye pakanga pasina nzira: /
Ini ndaizoedza asi ini ndinongova nehofisi 2007 uye maacces anoshanda pa100.
Ndinoona kuti inotaridzika zvakanaka muFedora.Kuita chinhu chimwe chete muUbuntu zvinoita here? Ini ndinobvunza nekuti ini ndakaisa iyo 2007 vhezheni nguva yakareba yapfuura ndisina kushandisa Play paLinux (kuiisa yakananga muWine kwaive kwakaringana) uye yakashanda zvikuru. Asi kuda kuita zvakafanana neshanduro ya2010 yakanaya uye iyo yekukanda skrini haina kupfuura.
Pindura kuna Itzcuauhtli
Inoshanda zvakafanana, ndakaiisa kubuntu 12.04 ne PlayOnLinux uye ini ndanga ndisina dambudziko, kureva kuti, ini ndaisafanirwa kuisa kutsamira kwesamba, zvingave zviri nekuti ubuntu unotoiunza nekusingaperi?
pane chero munhu anoziva kugadzirisa dambudziko rekumisikidza hofisi 2010 mune dianian wheezy?
Uye ndingaisa sei mutswe XD ndinovimba munogona kundipindura ndatenda 😀
Ndiwo maitiro akafanana neWin32, ingoenda kuWine folda, kazhinji nguva dzose muzvirongwa zvemenu uye tinya pa Ongorora C: Dhiraivha, ipapo tsvaga maFiles Files / OFFICE12
Mhoroi, ndatenda iyo posvo, ini ndakaiisa mu fuduntu 2013 uye zvese zvanaka, Thanks ..
Pindura kuna Falcoman
Qreator: kunyorera kugadzira QR kodhi